In ka badan 300 oo dhalinyaro Kenyan oo isaga baxay Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
In ka badan 300 oo dhalinyaro Kenyan oo isaga baxay Al-Shabaab
Urur-rada Bulshada Rayadka Kenya ayaa ku guuleysatay in ay dhalinyaro fara badan ka soo badbaadiyaan Al-Shabaab.
NAIROBI, Kenya - In ka badan 300 oo dhalinyaro Kenyan ah oo si dhuumaaleysi ah ku soo galay Soomaaliya si ay tababar ciidan uga helaan kooxda Al-Shabaab, ayaa lagu guuleysaty in dib loogu celsho dalkooda, kadib dadaallo ay hormuud u ahaayeen Urur-rada Bulshada.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay Dowladda Kenya, dalaallo badan oo ay qeyb lixaad leh ka qaateen bulshada rayidka ayaa sababtay in lixdii bilood ee la soo dhaafay dib loo soo celiyo dhalinyarada, kuwaas oo badankood ay da'doodu ka hooseyso 30 sano.
Al-Shabaab ayaa dhalinyaradaan ka tashkiiliyay gobolka Xeebta, wuxuuna qorshuhu ahaa, in ay hormuud u noqdaan dagaalka ay kula jiraan Kenya.
Isaga oo ku sugan magaalada Frere ee Mombasa, Canon Harun Rashid oo ka socda Xarunta Ka-hortagga Argagixisada (NCTC) ayaa sheegay in Dawladdu ay si shuruud la’aan ah u aqbashay in ay dib u celiso dhallinyarada ka dib markii ay ka baxeen kooxda Al-Shabaab.
Ururada Bulshada Rayidka ah ee ka qeyb galay soo celinta dhalinyarada waxaa ka mid ah Mombasa Women of Faith Network, Haki Africa iyo Kecosce, waana arrin ay wax badan ka faa’iidi karaan Urur-rada bulshada Soomaalida.
Ku xigeenka gudoomiyaha Nyali, Harun Kamau, ayaa sheegay in Dowlada ay sii wadi doonto ka dhaadhicinta dhalinyarada kenyaanka ah ee wali la jooga Al-Shabaab inay ku soo laabtaan wadankooda.
Arrintaan waxa ay daaha ka qaadeysaa in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, laga soo saari karo fikirka xagjirnimada, iyadoo loo marayo Urur-rada Bulshada Rayadka.
Dhibaatadii ugu weyneyd oo ka taaagan waddoonka Muqdisho
Warar 29 July 2021 9:56
Inkastoo Muqdisho dhex maquuraneysay mashaqada jid gooyooyinka tan iyo markii uu xaafiiska Madaxweynaha yimid Farmaajo, hadana Maamulka Cumar Finish ayaa xaaladda uga sii daray.